ठेक्का किर्ते काण्डमा हिरासतमा रहेका अभियुक्तको नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकको २२ करोड ऋण ! | Diyopost
ठेक्का किर्ते काण्डमा हिरासतमा रहेका अभियुक्तको नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकको २२ करोड ऋण !
काठमाडौं, १० चैत्र । नक्कली कागजात बनाएर करोडौंको ठेक्का हत्याएको अभियोगमा पक्राउ परेका भ्याली कन्स्ट्रक्सनका मालिक रविन्द्र महर्जनले एक बैंकबाट २२ करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको खुलाशा भएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकबाट महर्जनले २२ करोड रुपैयाँ निकालेको सोही कम्पनिमा कार्यरत एक कर्मचारीले दियोपोस्टलाई बताए । ‘उहाँले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट यहि कम्पनि राखेर २२ करोड ऋण निकाल्नु भएको छ । बैंकमा कम्पनिको स्क्याभेटर र गाडीहरु छन् । ३ वटा त प्राडो गाडी नै छ,’ भ्याली कन्स्ट्रक्सनमा कार्यरत एक कर्मचारीले दियोपोस्टलाई भने,‘उहाँ पक्राउ परेपछि बैंकलाई समेत समस्या पर्ने देखिन्छ ।’
सिआइबी स्रोतका अनुसार उनले कर चुक्ता प्रमाण पत्र समेत नक्कली बनाएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढेको छ । यद्धपी एथेष्ट प्रमाण हात परेको छैन ।
महर्जनको कम्पनिले भ्यालि कन्स्ट्रक्सनबाट ललितपुरमा चार वटा विद्यालय निर्माण गरेका छन् । उनले धादिङ र मकवानपुरमा गरि १९ वटा विद्यालयको ठेक्का हत्याएका छन् । मकवानपुरमा १९ वटा विद्यालयको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको पाइएको छ । त्यस्तै धादिङमा १० वटा विद्यालयको भवन ३ महिनाअघि देखि निर्माण शुरु गरेको पाइएको छ ।